Uma uqala ukulima kwezingulube eNingizimu Afrika uzodinga uhlelo. Eqinisweni, yonke ibhizinisi yezolimo zezingulube idinga uhlelo, kusukela ekulinganisweni eyinkulungwane yokuhlwanyela emhlambini wezingulube ezimbili emngceleni womnikazi omthombo ompofu ofuna ukukhulisa imali yomndeni wakhe.
Kungakhathaliseki ukuthi iyinhlangano enkulu yezingulube zezingulube noma omncane, imithetho yokuhlela eyisisekelo iyafana. Into yokuqala okuzoqala ngayo yimiphumela oyifunayo, umphumela wokuphela. Ingabe ufuna ukuzala nokuthengisa ama-weaners? Noma uthenge ama-weaners bese uwakhula ukuba ahlatshwe? Noma uthenge futhi uthengise izingulube njenge-speculator? Noma ukuzala nokuphakamisa izingulube ezincane kuze kuhlatshwe-ubudala?
Into yesibili okufanele ucatshangelwe lapho uqala ipulazi lezingulube ukulinganisa izidingo zamakethe - ukuthi ziguquguquke kanjani, zonyaka nokuthi yikuphi ukuncintisana okukhona kakade.
Okwesithathu, cabangela imingcele, imithetho, imithethonqubo yempilo kanye nemvelo, izinhloso zokuhlela idolobhana noma indawo ohlela ukuyibeka epulazini lakho?
Bese, yenza izindleko zokuqala zokukhiqiza. Uzodinga ukubala izindleko eziyisisekelo zempahla eluhlaza, yiziphi izakhiwo (njengezindlu) ezidingekayo, ukuthi kungakanani ukukhiqizwa kanye nenani labasebenzi namanqanaba azo amakhono oyodinga.
Uma umkhiqizo wokuphela ungonakala (inyama yengulube), thola ukuthi yimuphi umthamo wokuphila kanye nesitoreji, isiqandisini, izithuthi, ukupakisha oyodinga.
Imali Okufuya Izingulube
Uma uhlela ukulima kwezimvu kumele uthole imali ukuze uqhube ibhizinisi elisha ngesikhathi sokuthuthukiswa. Isigaba sokuthuthukiswa sizobandakanya ukubeka ucingo, izakhiwo zemikhakha kanye nezindlu, ukuthenga imishini nokuhlanza ukusebenza, amandla, amanzi, amazinga, umshuwalense, ngenkathi ukhokha izindleko zendlu yakho.
Thola ukuthi kuyoba isikhathi esingakanani ngaphambi kokuthola inzuzo ukuze ukugeleza kwemali kube okuhle futhi uqale ukwakha emuva.
Ukulinganisela okukwenyuka kwezimali ngokweqile kuyadingeka, kodwa ngokuvamile kuyingxenye ebaluleke kakhulu ohlelweni lwebhizinisi. Omunye uzama ukubikezela izindleko zokukhiqiza, inzalo kumalimboleko, ukuqhuba izindleko, ukugcina isitoreji nokulinganisela lokhu ngokumelene nokubuyiswa ekuthengiseni esikhathini esizayo lapho amanani nezindleko ziguqukile futhi zingenakulinganiswa.
Kodwa-ke, uma usomabhizinisi oqala ukuqala ukufuna enye yemithombo yezimali futhi angathathwa ngokungathí sina, kungenzeka ukuthi waya enkingeni ukucela usizo lomuntu oqonda imali futhi, njengoba kubalulekile kulokhu, izingulube.
Ngokubambisana, bazokwazi ukuthuthukisa uhlelo lwebhizinisi okufanele lubafinyelele esigabeni sokuqala sebhizinisi elisebenzayo.
Kunezinhlangano eziningana ezikwazi ukusiza nokugxila ekusekeleni kwabalimi abancane abancane ngokukhethekile.
Uhulumeni waseNingizimu Afrika ungumholi emkhakheni kanye nokulandelana kwabeNgqongqoshe bezeLimo kubhalwe njengabaxhasi abaqinile bebalimi bezokulima kanye nabalimi emkhakheni ongakahleleki. Kukhona isikhwama esikhulu esitholakale kwisabelomali sonyaka kanye ne
Iminyango yesifundazwe yezoLimo, lokhu kwabiwa futhi kusetshenziswe ngamakomidi okukhetha esifundazweni okumele avezwe yizo ezikhethekile eziphathelene nokulima. Ezinye izikhali zikahulumeni ezifana noMnyango Wezokuthuthukiswa Kwezindawo Zasezindaweni Zasekhaya kanye nokuBuyiselwa Komhlaba kunendima.
Kodwa-ke, akukho mali eyanele yokwanelisa izicelo ngakho ezinye izinhlangano zifika esithombeni, kubandakanya iBhange loMhlaba, izimali zokusiza ezifundazweni kanye nomasipala.
Ngokuvamile, umkhiqizi wezinkukhu oqalayo noma omncane wezinkomo kufanele afike eMnyangweni wesiFundazwe kuqala futhi athole isigaba esibhekene nokusekelwa kwepulazi nentuthuko.
Ukuqeqeshwa Nezeluleko Kubafuyi Abasha Bezingulube
Inhlangano evelele kakhulu futhi ekhuthele yiNhlangano YaseNingizimu Afrika Yokukhiqiza Ngengulube (SAPPO), lapho abakhiqizi abaningi bezohwebo bengabakho. I-SAPPO manje ikhulisa ubulungu bayo emkhakheni wezinkomo ezincane ezilindelekile wezingulube.
I-SAPPO inokuthola imali yokukhokhela imali eyenziwa ngabalimi bezokuhweba futhi iqoqwe ekuhlatshweni ngekhanda ngalinye. Lezi zimali zithi, ngokubonisana nohulumeni, abaqashwe ukugqugquzela imboni yengulube futhi iphesenti liqondiswe kubalimi abalimi abasebenza ngemisebenzi ehlobene nokuphakanyiswa nokuqeqeshwa. Lezi zimali, azikho imali yokuxhasa izimali ezintsha noma izindleko zokudla.
I-Pig Veterinary Society (i-PVS) yiqembu le-South African Veterinary Association elisebenzisana ngokubambisana ne-SAPPO kanye nabakhiqizi bezohwebo ekuhleleni izifundo zokuqeqesha nezeluleko, imibukiso esebenzayo kanye nezikhathi zokuhlela. Lezi zikhathi zokuqeqesha zigxila ekuziphatheni kwezinhlanzi, inhlalakahle, ukudla kanye nezindlu zezingulube, ukuvimbela izifo kanye nokuphathwa.